XOG: Wax Ka Ogow Qabiilada Wasiiradda La magacaabay Iyo Ujeedada Loo Magacaabay – Puntland24.net
Home Somalia, Wararka Maanta XOG: Wax Ka Ogow Qabiilada Wasiiradda La magacaabay Iyo Ujeedada Loo Magacaabay
XOG: Wax Ka Ogow Qabiilada Wasiiradda La magacaabay Iyo Ujeedada Loo Magacaabay
Saddexda Wasiir ee badalay Wasiiradii uu xilka ka qaaday Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur Wasrsame, ayaa mid kasta laga leeyahay ujooyin badan, halka Wasiiradii shaqada laga cayriyayna sababta shaqada looga cayriyay ay xambaarsanaayeen Macnayaal badan.
Qabiiladooda Wasiiradda La Magacaabay Iyo Sababta Loo Magacaabay;
Hadaba Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibada Axmed Ciise Cawad, wuxuu kaso jeeda Beesha Ciise Maxamuud, waxaana ay isku hayb ahaayen Wasiirka lagu badalay.
Sababta xilkan loogu magacabay Axmed Ciise Cawad ayaa ah inuu yahay Siyaasi u hogaansamaya Amarada la siiyo, isla markanaa ma ahan Siyaasi si Madaxbannaan u dhiiban kara aragtidiisa.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha gudaha Soomaaliya Mudane Cabdi Mohamed Sabriye wuxuu kaso jeeda Beesha Habar Gidir, waana nin ku cusub Saaxadda Siyaasada, sababta ugu wayn ee loo magacaabay ayaa ah inuu dejiyo Xiisada Siyaasadeed ee Muqdisho ka taagan, waxaana laga doonayaa inuu wajaho Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur oo ah hogaamk Siyaasiyiinta Mucaaradka ah iyo ragga ay isku xulufada yihiin oo ay isku beel kaso jeedaan.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wuxuu kaso jeeda Beesha Isaaq, wuxuu xilal kala duwan kaso qabtay Xukuumadihii dalka soo maray, waana nin muddo joogay Muqdisho oo aad ugu dhuundaloola Siyaasadaha.
Waa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, sababta loo magacabay waa inuu qayb ka ahaa Xildhibaanada Mooshinka ka dhan ah Madaxda Soomaaliya Karkarinaya, waana arrin lagu kala furfurayo Xildhibaanada Mucaaradka ah.
Waxaa xusid mudan inay jiraan Xildhibaano kale oo dhaqaale iyo balan qaad la isugu dari doono, waxaana Ra’iisul Wasaaruhu uu ku hawlan yahay sidii uu gabi ahaanba meesha uga saari lahaa Mooshinka.
Filed in: Somalia, Wararka Maanta